Thursday August 09, 2018 - 11:08:04 in Wararka by Super Admin
Xukuumadda dabadhilifka Wadanka Lubnaan ayaa go'aamisay in lacago Malaayiin dollar ah oo uu lahaa madaxweynihii hore ee Ciraaq ay ku wareejiso xukuumadda shiicada ee Fadhigeedu yahay magaalada Baghadaad.
Guddiga Bankiga dhexe ee Lubnaan ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in lacago uu si gaar ah ulahaa Sadaam Xuseen madaxweynihii hore ee Ciraaq ay uxawileen Bankiga Federaaliga Mareykanka kaasi oo usii diray xukuumadda shiicada Ciraaq.
Jozeef Doribah ayaa sheegay in lacagihii Sadaam Xuseen ay qeyb ka yihiin lacago boqolaal Milyan oo dollar ah oo dib loogu celinayo Ciraaq si xukuumadda uu Hoggaamiyo Xeydar Alcabaadi ay ugu kaashato wax ka qabashada sicir bararka iyo shaqa la'aanta haraysay.
Saraakiil katirsan Garsoorka Lubnaan ayaa sheegay in akoonno gaaraya 4200 oo ay leeyihiin qoyska Sadaam Xuseen ay wali ka furanyihiin Bankiga dhexe ee Lubnaan ayna ku keydsanyihiin lacago malaayiin dollar ah balse waxay diideen in lacagahaas loo wareejinayo xukuumadda shiicadu ku badantahay ee Baqdaad kajirta.
Sanaddii 2013 ayay Ciidamada dowladaha Mareykanka iyo Ingiriiska duullaan ku qaadeen wadanka Ciraaq iyagoo riday dowladdii madaxda ka ahaa Sadaam Xuseen kuna bedelay xukuumad maqaar saar ah.
Ruushka oo iska cirdeeyay diyaarado halis gelin lahaa ammaankiisa gudaha.
Saciid Deni oo ka baaqday safar uu ku tagi lahaa Muqdisho.